९ जना भारतिय नेपाल पसेर बच्चा चो र्दै गर्दा भेटेपछि रामधु ला ई ग रे ,आमा बुबाले सुनाए सन्सनीपूर्ण नालीबेली (भिडियो) - Rising Dainik
९ जना भारतिय नेपाल पसेर बच्चा चो र्दै गर्दा भेटेपछि रामधु ला ई ग रे ,आमा बुबाले सुनाए सन्सनीपूर्ण नालीबेली (भिडियो)
May 7, 2021 May 7, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on ९ जना भारतिय नेपाल पसेर बच्चा चो र्दै गर्दा भेटेपछि रामधु ला ई ग रे ,आमा बुबाले सुनाए सन्सनीपूर्ण नालीबेली (भिडियो)
झापा / झापामा नसोचेको घट’ना घटेको छ । झापामा एउटा बालक जो दुई वर्षको बालक भारतीय नौ जनाको समूह जसमा एकजनाले बोरामा हाल्दै गरेको भेटिएको छ । सबैजना गाउँलेहरु मिलेर त्यो चो रलाई भेटेर स मा तेर राम धु ला इ गरेका छन् सबै छक्क पर्ने यो घट’ना यो लगाउनको समयमा झापामा घ’टेको हो । भारतको सिमाना नजिकै रहेको भद्रपुरको एउटा गाउँमा भारतीय केही व्यक्तिहरु गाउँमा छिरेर २ वर्षिय बालकलाई बोरामा हाल्दै गरेको घरकी हजुरआमाले देखेपछि उनलाई कु ट पि ट ग र्न था लेकी थिइन ।
त्यसको केही समय बित्न नपाउँदै गाउँलेहरु सबै भेला भएर त्यो बच्चा चो’रलाई समातेर प्रहरीलाई जिम्मा लगाएका छन । गाडीमा बस्न निकै अटेर गरेपछि प्रहरीले ज बर्ज स्ती गाडीमा हुलेर लगेको थियो । प्रहरीको अनुसन्धानपछि यो खुल्न आएको छ कि जम्मा जनाको समूह झापा भरि अरु 8 जना छरिएर बच्चा चो री ग र्ने योजना गरेको ‘पक्रा’उ पर्ने भारतीय व्यक्तिले जनाएका छन ।
केही पत्रकारहरूको टोली आज घ’टनास्थलमै पुगेर स्थलगत रिपोर्टिङ गरेको छ । घट’नास्थलमा पुग्दा सुरुमा बच्चालाई बोरामा हाल्दै गर्दा देख्ने दिदी पहिलोपटक मिडियामा आएकी छिन् दिदीले सुरुदेखि को सम्पूर्ण नालीबेली यसरी बताइन् कि सुनेर सबै छक्क परे । बच्चालाई बोरामा हा ल्दै गर्दा चो’रलाई समात्ने र रा मधु ला ई हा न्ने सा ह सी आमा जसको कुरा सुन्दा सबै चकित परे । बच्चा चो’रलाई सोधपुछ गर्दा चो’रले यस्तो सम्म सुनाएको रहेछ तलको भिडियो हेर्नुहोला तपाई छक्क पर्नुहुनेछ ।
तलको भिडियो हेर्नुहोला
त्यसैगरी थप ९१९६ जनामा संक्रम’ण, ५० जनाको मृ’त्यु
पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना ९१९६ जनामा को’रोना भाइरस संक्रम’ण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार १९ हजार ९८७ पीसीआर परीक्षणमा ९ हजार २३ र ४९५ एन्टिजेन परीक्षणमा ७३ जना गरी ९१९६ जनामा संक्र’मण पुष्टि भएको हो । को’रोना भाइरस संक्रम’णका कारण पछिल्लो २४ घण्टामा ५० जनाको मृ,त्यु भएको छ, त्यस्तै २ हजार ९०५ जनामा संक्र’मण मुक्त भएका छन् ।
पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौँ जिल्लामा मात्र ३ हजार बढी संक्र’मित थपिएका छन् । काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लामध्ये काठमाडौँमा ३०८९, ललितपुरमा ६४३ र भक्तपुरमा ३७४ जनामा संक्रम’ण पुष्टि भएको हो। प्रदेश १ मा झापामा २१६ तथा मोरङमा २७३ जना संक्र’मित थपिएका छन् । प्रदेश २ मा पर्सामा १३० तथा धनुषामा १०६ जना संक्रमि’त भेटिएका छन् ।
गण्डकीमा कास्कीमा ३९३, लुम्बिनीमा दाङमा ३६६ तथा रुपन्देहीमा ७३० जना संक्रमित भेटिएका छन् । सुदूरपश्चिममा कैलालीमा सर्वाधिक १२५ जना संक्र’मित थपिएका छन् । यही अवधिमा थप २ हजार ९०५ जना निको भएका छन् । नेपालमा हाल सम्म २ लाख ९५ हजार ३९५ जना निको भएका छन् । नेपालमा सं’क्रमित थपिएसँगै निको हुने दर ७८.२ प्रतिशतमा पुगेको छ ।
सिन्धुलीमा कलिलो आठ बर्षिय बालकको को’रो’ना’का कारण उपचार गर्दा गर्दै दु’ख’द नि’ध’न
अस्पतालमा बेड छैन, अक्सिजन पनि छैन, बिरामीहरु धमाधम पीपलको बोट मुनि बस्न बा’ध्य
व्यापारी रानाको यसरि भयो ह’त्या, ह’त्याको कारण परस्त्री हुन् सक्ने
March 2, 2021 March 2, 2021 Ramash Kunwar
खिरपुरीवाली बेहुली श्रीमानसंगै पहिलो पटक मिडियामा, बेहुलीले गाडीमा आमालाई सम्झाउँदै गर्दा आफुपनि गाडीभित्र भावुक भएको बताउँछन् श्रीमान (भिडियोसहित)
December 13, 2020 Ramash Kunwar
गरीबी निवारण कोषमा टेबलदेखि ल्यापटपसम्म गायब, सवा ४ करोडका सामान घरघरमा !
April 29, 2021 Ramash Kunwar
सर्वोच्चलाई राष्ट्रपतिको जवाफ: ‘राष्ट्रपतिले गरेका निर्णय अदालतले औँला उठाउन सक्दैन’ June 17, 2021
अन्ततः ठेगान लागे ओली, एमाले अध्यक्षमा माधव कुमार नेपाल ! June 17, 2021
महेन्द्र राजाको बाटोमा ओली, पञ्चायती निर्दलीयता व्यवस्था ब्यूँत्याउने ओलीको घोषणा ! June 17, 2021
‘किङमेकर’ माधव नेपाल, घरमा नेताहरुको लाइन् ! को-को ? June 17, 2021
भारत र बालुवाटारबाट बाबुरामलाई बारम्बार आउन थाल्यो ख’तरनाक ध’म्की June 17, 2021